China Mega PU ရေမြှုပ်လက်စွဲအမျိုးအစားထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - GNS
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Mega PU ရေမြှုပ်လက်စွဲစာအုပ်အမျိုးအစား
Mega PU ရေမြှုပ်လက်စွဲစာအုပ်အမျိုးအစားသည်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအရည်အသွေးမြင့်မားသောအမျိုးမျိုးသော polyurethane အမြှုပ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပလတ်စတစ်အသင့်သုံးကောက်ရိုးနှင့်အသုံးပြုရန်အတွက်အဆင်ပြေသောပလပ်စတစ်ခေါင်းတစ်လုံးနှင့်တပ်ဆင်ထားသည်။ ဖြည့်စွက်နိုင်သည့်စွမ်းရည်ကောင်းမွန်ပြီးအလွန်ကောင်းမွန်သော elasticity ရှိသည်။ စျေးကွက်ရှိ PU မြှုပ်ပစ္စည်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၎င်းသည်အရှည်ဆုံးမီတာ ၂၈ မီတာရှိပြီးယေဘုယျအားဖြင့်အထွက်နှုန်းအများဆုံးဖြစ်သည်။
MEGA PU ရေမြှုပ်လက်စွဲစာအုပ်၏ 1.PRODUCT Feature
- တံခါးနှင့်ပြတင်းပေါက်ဘောင်များကိုတပ်ဆင်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်းနှင့်သီးခြားထားခြင်း၊
- ကွာဟချက်များ၊ အဆစ်များ၊ အပေါက်များနှင့်အခေါင်းပေါက်များဖြည့်စွက်ခြင်း၊
- ထုပ်ပိုးရန်ရည်ရွယ်ချက်၊ တန်ဖိုးရှိသောပျက်စီးလွယ်သောကုန်ပစ္စည်း၊
Mega PU ရေမြှုပ်လက်စွဲစာအုပ်၏ 2.PERFORMANCE ဒေတာ
ထိပါးမဲ့အချိန် (မိနစ်) ၅ ~ ၆
ခြောက်သွေ့ချိန် 10-12 မိနစ်ပြီးနောက်ဖုန် - အခမဲ့ဖြစ်သည်။
ဖြတ်တောက်ခြင်းအချိန် (မိနစ်) 30 ~ 40
ဆယ်လူလာဖွဲ့စည်းပုံ > 90% ပိတ်ထားသောဆဲလ်
အထူးဆွဲငင်အား (kg / m³) 13
အပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိသည် -50â "~ ~ 80" "
လျှောက်လွှာအပူချိန် Range + 18â "~ ~ 30" "
မီးသတ်သင်တန်း (DIN 4102) ခ
insulator တွင်လည်းအချက် (Mw / m.k) 0.036
ဖိအားပေးမှု (kPa) 110
ဆန့်နိုင်စွမ်း (kPa) 140
ကော်အစွမ်းသတ္တိ (kPa) 120
ရေစုပ်ယူမှု (ML) ၀.၅ ~ ၂ (အရေပြားယားယံခြင်းမရှိ)
<0.5 (epidermis နှင့်အတူ)
MEGA PU FOAM လက်စွဲစာအုပ်အမျိုးအစား ၃။ လျှောက်လွှာများ
MEGA PU ရေမြှုပ်လက်စွဲစာအုပ်၏ 4.APPLICATION ညွှန်ကြားချက်များ
MEGA PU ရေမြှုပ်လက်စွဲစာအုပ်၏ 5. သိုလှောင်မှုနှင့်သက်တမ်း
၁၂ လကြာပွင့်လင်းသောထုပ်ပိုးထားသောစတိုးဆိုင်တွင် + ၅ - ၂ မှ ၂၅ အတွင်းအကြား၊ အပူရှိန်၊ အေးသော၊ အရိပ်နှင့်လေဝင်လေထွက်ကောင်းသောနေရာတွင်ထားပါ။ အမြဲတစေအဆို့ရှင်နှင့်အတူလုပ်နိုင်တဲ့စောင့်ရှောက်လော့။
MEGA PU FOAM လက်စွဲအမျိုးအစားကိုထုပ်ပိုးခြင်း၊ ပို့ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း
ထုပ်ပိုးမှု - ၇၅၀ မီလီမီတာ ၅၀၀ မီလီမီတာ ၃၀၀ မီလီမီတာ၊ ဘူးခွံ ၁၂ ခု။ (အထူးသတ်မှတ်ချက်များအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ )
တင်ပို့ခြင်း - ပင်လယ်သို့မဟုတ်ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
Q: PU အမြှုပ်၏အရောင်ကဘာလဲ?
A: သာမန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဖြူရောင်ရှိသော PU အမြှုပ်များကိုထုတ်လုပ်သည်။ ဖောက်သည်တစ် ဦး အထူးလိုအပ်ချက်ရှိပါကကျနော်တို့အရောင်များကိုချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။
Q: အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကောင်းမွန်သော elasticity ရှိသော PU မြှုပ်ကိုရွေးချယ်သင့်သနည်း။
A: ကောင်းမွန်သော elasticity ဖြင့် PU မြှုပ်သည်ပူပြင်းသည့်ရာသီဥတုကြောင့်တံခါးနှင့်ပြတင်းပေါက်များကိုမပျက်စီးစေနိုင်ပါ၊
hot Tags:: လက်လီ၊ ၀ ယ်ခြင်း၊ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ခြင်း၊ တရုတ်၊ စျေးပေါ၊ အရည်အသွေးကောင်း၊ အရည်အသွေးမြင့်၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပေးသွင်းသူများ၊
Mega PU ရေမြှုပ်ပရီမီယံအရည်အသွေးအမြှုပ် PUPolyurethane မြှုပ်ထိပ်တန်းအရည်အသွေးမြင့်မားသော elasticity PU အမြှုပ်မြင့်မားသောပြင်းထန်မှုမြှုပ်